Malunga neKAIGUAN | I-Changzhou Kaiguan Packaging Technology Co, Ltd.
Ukupakishwa kweChangzhou Kaiguan kunye neTekhnoloji, Ltd.
I-KAIGUAN-Ukupakisha imveliso yomenzi
Iminyaka eli-12 yamava kushishino lokupakisha kwendalo
Amandla okwenza ulwenziwo oluntsonkothileyo kwishishini lakho lesicelo
Changzhou Kaiguan Packaging & Technology Co., Ltd.ise Changzhou, kwiphondo Jiangsu, China. Kusembindini we-Yangtze oselunxwemeni ophucukileyo uvelisa umlambo kunye nokuhamba okufanelekileyo kunye nokusingqongileyo okuphezulu. Singabantu ishishini lobuchwephesha labucala elinamava atyebileyo kuyilo, kuphuhliso, ukuvelisa iimveliso zokupakisha eziguqukayo.
Sisebenzisa ubuchwephesha obuphambili kwihlabathi, sisebenzisa izixhobo zokukhusela indalo, siyilawula itekhnoloji yokuvelisa iimveliso zokupakisha ezikhuselekileyo.
Iimveliso zethu eziphambili zokupakisha zi-cheertainer (ibhegi ethe nkqo ebhokisini), i-ldpe cubitainer, isikhongozeli samanzi esinokuwohloka, i-jeri esongelayo kunye noomatshini bokugcwalisa.
Njengoko imveliso yethu entsha ukupakisha, ibhegi cheertainer yenziwe ngeplastiki multilayer. Uluhlu lwangaphandle (i-polyamide + polyethylene) lukhusela kwioksijini kunye nokufuma; Ubuninzi bayo kunye nokwakheka kwayo kungahluka ngokuxhomekeke kwiimfuno zomthengi okanye imveliso. Uluhlu lwangaphakathi (i-polyethylene) luthambile kwaye luyamelana nokukrazuka. Yindlela ethe tyaba yokufaka izinto kulwelo ngokwesiko, ukubonelela ngezibonelelo zesikhongozeli esiqinileyo kunye nokuzinza okuguqukayo malunga nokuhamba kunye neemfuno zokugcina. Izakonga ukuya kuthi ga kwi-80-90% kwindawo yokugcina izinto kunye nokwehliswa okufanayo kwiindleko zothutho lwangaphakathi kunye nokonga kwimveliso ye-CO2.
Ibhokisi yenziwe ngokwesiko. Njengoko yenziwe ngekhadibhodi, onke amacala angashicilelwa, anika indawo enkulu yonxibelelwano.
Inkampani yethu inolawulo olungqongqo kuyo yonke ikhonkco lomgangatho wemveliso kwasekuqaleni. silandela ubudlelwane bexesha elide kunye noluzinzileyo lwentsebenziswano nabathengi, sinikezela iinzame zokwenza ukuba inkampani ifumane uphuhliso lwexesha elide.
Sinesimo sengqondo esivulekileyo nesinyanisekileyo, sijonge phambili kubo bonke abahlobo ukuba babe nonxibelelwano kunye nophando kwinkampani yethu, babonelele ngolwazi abalufunayo kwaye babancede ukusombulula iingxaki zoyilo.
Siyathemba ukuseka ubambiswano lwexesha elide nabo bonke abasebenzisi ngekamva elihle
Khetha uKaiguan, khetha umgangatho!
U-Kaiguan-uthathe inxaxheba ngempumelelo kulo mboniso!
Isidingo somThengi kunye nengcebiso ngamandla ethu okuqhuba, ukoneliseka kwabathengi kukusukela kwethu.
Ngoku sijonge phambili kwintsebenziswano enkulu kunye nabathengi baphesheya ngokusekwe kwizibonelelo ezifanayo.